အကျပ်အတည်းကာလများ၌ကြီးကြပ်ရေးအဖွဲ့၏အခန်းကဏ္ | | Law & More B.V.
ဘ‌‌လော့ခ် » အကျပ်အတည်းကာလများ၌ကြီးကြပ်ရေးအဖွဲ့၏အခန်းကဏ္။
ငါတို့အပြင် ကြီးကြပ်ရေးဘုတ်အဖွဲ့အပေါ်အထွေထွေဆောင်းပါး (အောက်တွင် 'SB') ကျွန်ုပ်တို့သည်အကျပ်အတည်းကာလများအတွင်း SB ၏အခန်းကဏ္onကိုအာရုံစိုက်လိုသည်။ အကျပ်အတည်းကာလများအတွင်းကုမ္ပဏီ၏စဉ်ဆက်မပြတ်ကာကွယ်မှုသည်ယခင်ကထက် ပို၍ အရေးကြီးသောကြောင့်အရေးကြီးသောထည့်သွင်းစဉ်းစားမှုများပြုလုပ်ရန်လိုအပ်သည်။ အထူးသဖြင့်ကုမ္ပဏီ၏သိုက်နှင့်အမျိုးမျိုးသောအကျိုးစီးပွားနှင့်ပတ်သက်။ သက်ဆိုင်သူများ ပါဝင်ပတ်သက်။ SB ၏ပိုမိုအားကောင်းသောအခန်းကဏ္ justified သည်ဤကိစ္စတွင်တရားမျှတမှုရှိသလားသို့မဟုတ်လိုအပ်ပါသလား။ COVID-19 နှင့်လက်ရှိအခြေအနေများတွင်၎င်းသည်အထူးအရေးကြီးသည်၊ အဘယ့်ကြောင့်ဆိုသော်ဤအကျပ်အတည်းသည်ကုမ္ပဏီ၏ဆက်လက်တည်ရှိမှုအပေါ်အဓိကသက်ရောက်မှုရှိပြီး၎င်းသည်ဘုတ်အဖွဲ့နှင့် SB တို့သေချာသင့်သည့်ရည်မှန်းချက်ဖြစ်သည်။ ဤဆောင်းပါး၌၊ ဤအချက်သည်လက်ရှိ Corona အကျပ်အတည်းကဲ့သို့သောအကျပ်အတည်းကာလတွင်မည်သို့အလုပ်လုပ်သည်ကိုကျွန်ုပ်တို့ရှင်းပြသည်။ ၎င်းတွင်လူ့အဖွဲ့အစည်းတစ်ခုလုံးအပေါ်အကျိုးသက်ရောက်သည့်အကျပ်အတည်းကာလများအပြင်ကုမ္ပဏီကိုယ်တိုင်အတွက် (ဥပမာ - ဘဏ္problemsာရေးပြproblemsနာများနှင့်လွှဲပြောင်းယူခြင်း) အတွက်အရေးကြီးသောအချိန်များပါဝင်သည်။
BV နှင့် NV အတွက် SB ၏အခန်းကဏ္articleကို DCC ၏ဆောင်းပါး ၂၊ ၁၄၀/၂၅၀ အပိုဒ် ၂ တွင်ဖော်ပြထားသည်။ ဤပြဌာန်းချက်တွင်ဤသို့ဖတ်ရသည် -“ ကြီးကြပ်ရေးအဖွဲ့၏အခန်းကဏ္ to သည်၊ ကြီးကြပ်ကြည့်ရှု ကုမ္ပဏီ၏အထွေထွေရေးရာစီမံခန့်ခွဲမှုဘုတ်အဖွဲ့၏မူဝါဒများ။ ဒါဟာကူညီလိမ့်မည် အကြံဥာဏ်နှင့်အတူစီမံခန့်ခွဲမှုဘုတ်အဖွဲ့။ ၄ င်းတို့တာ ၀ န်များကိုထမ်းဆောင်ရာတွင်ကြီးကြပ်ရေးဒါရိုက်တာများကို ဦး ဆောင်ရမည် ကုမ္ပဏီ၏အကျိုးစီးပွါးနှင့်၎င်းနှင့်သက်ဆိုင်သည့်စီးပွားရေးလုပ်ငန်း။ " ကြီးကြပ်ကွပ်ကဲရေးဒါရိုက်တာများ (ကုမ္ပဏီ၏အကျိုးစီးပွားနှင့်၎င်းနှင့်ဆက်နွယ်နေသောစီးပွားရေးလုပ်ငန်းများ) ၏အထွေထွေအာရုံစိုက်မှုအပြင်၊ ဤဆောင်းပါးသည်တိုးမြှင့်ကြီးကြပ်သောကြီးကြပ်မှုအားမည်သည့်အခါမျှအကြောင်းပြချက်မပေးပါ။
SB ၏တိုးမြှင့်အခန်းကဏ္ of ၏နောက်ထပ်သတ်မှတ်ချက်
စာပေနှင့်အမှုဆိုင်ရာဥပဒေတွင်ကြီးကြပ်မှုပြုရမည့်အခြေအနေများကိုအသေးစိတ်ဖော်ပြထားသည်။ ကြီးကြပ်ရေးတာဝန်သည်အဓိကအားဖြင့်စီမံခန့်ခွဲမှုဘုတ်အဖွဲ့၏လုပ်ငန်းလည်ပတ်မှု၊ ကုမ္ပဏီ၏မဟာဗျူဟာ၊ ဘဏ္situationာရေးအခြေအနေ၊ စွန့်စားမှုမူဝါဒနှင့် လိုက်နာခြင်း ဥပဒေနှင့်အတူ။ ထို့အပြင်စာပေသည်ထိုကဲ့သို့သောကြီးကြပ်ကွပ်ကဲမှုနှင့်အကြံဥာဏ်များကိုပိုမိုပြင်းထန်လာစေနိုင်သည့်အကျပ်အတည်းကာလများ၌ဖြစ်ပေါ်နိုင်သည့်အထူးအခြေအနေများကိုဖော်ပြထားသည်။
သို့သော်ဤတိုးမြှင့်ကြီးကြပ်မှုအဘယ်အရာကိုပါဝငျသနညျး ရှင်းနေသည်မှာ SB ၏အခန်းကဏ္ the သည်ဖြစ်ရပ်ပြီးနောက်စီမံခန့်ခွဲမှု၏မူဝါဒကိုအတည်ပြုခြင်းမျှသာမဟုတ်ပါ။ ကြီးကြပ်မှုသည်အကြံဥာဏ်နှင့်နီးကပ်စွာဆက်စပ်နေသည်။ SB သည်ရေရှည်မဟာဗျူဟာနှင့်စီမံခန့်ခွဲမှု၏မူဝါဒအစီအစဉ်ကိုကြီးကြပ်သောအခါမကြာမီတွင်အကြံဥာဏ်ပေးရန်ရောက်လာသည်။ ဤကိစ္စနှင့်စပ်လျဉ်း။ SB အတွက်ပိုမိုတိုးတက်သောအခန်းကဏ္ reserved မှကာကွယ်ထားသည်။ အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော်စီမံခန့်ခွဲမှုကတောင်းဆိုသောအခါအကြံဥာဏ်ပေးစရာမလိုသောကြောင့်ဖြစ်သည်။ အထူးသဖြင့်အကျပ်အတည်းကာလများ၌ထိပ်တိုက်ရင်ဆိုင်ရန်အလွန်အရေးကြီးသည်။ ၎င်းတွင်မူဝါဒနှင့်မဟာဗျူဟာသည်လက်ရှိနှင့်အနာဂတ်ဘဏ္situationာရေးအခြေအနေ၊ ဥပဒေစည်းမျဉ်းများနှင့်ကိုက်ညီမှုရှိ၊ မရှိစစ်ဆေးခြင်းနှင့်ပြန်လည်ဖွဲ့စည်းခြင်း၏လိုအပ်ချက်ကိုစစ်ဆေးပြီးလိုအပ်သောအကြံဥာဏ်များပေးခြင်းနှင့်သက်ဆိုင်သည်။ နောက်ဆုံးအနေဖြင့်သင်၏ကိုယ်ကျင့်တရားဆိုင်ရာသံလိုက်အိမ်မြှောင်ကိုသုံးရန်နှင့်အထူးသဖြင့်ဘဏ္theာရေးရှုထောင့်နှင့်စွန့်စားရမှုထက်ကျော်လွန်သောလူ့ရှုထောင့်များကိုကြည့်ဖို့လည်းအရေးကြီးသည်။ ကုမ္ပဏီ၏လူမှုရေးပေါ်လစီသည်အရေးကြီးသောအခန်းကဏ္ plays မှပါ ၀ င်သည်။ အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော်ကုမ္ပဏီသာမကဖောက်သည်များ၊ ၀ န်ထမ်းများ၊ ပြိုင်ဘက်များ၊ ပေးသွင်းသူများနှင့်လူ့အဖွဲ့အစည်းတစ်ခုလုံးအကျပ်အတည်းကြောင့်ထိခိုက်နိုင်သောကြောင့်ဖြစ်သည်။
အထက်ဖော်ပြပါအချက်များအရအကျပ်အတည်းကာလများ၌ SB ၏ပိုမိုပြင်းထန်သောအခန်းကဏ္roleကိုမျှော်လင့်နိုင်သည်မှာရှင်းနေပါသည်။ သို့သော်အနိမ့်ဆုံးနှင့်အမြင့်ဆုံးကန့်သတ်ချက်များကဘာတွေလဲ။ နောက်ဆုံးတွင်၊ SB သည်မှန်ကန်သောတာဝန်အဆင့်ကိုယူရန်အရေးကြီးသည်၊ သို့သော်၎င်းသည်ကန့်သတ်ချက်ရှိသလား။ ဥပမာ SB သည်ကုမ္ပဏီအားစီမံခန့်ခွဲနိုင်သည်။ သို့မဟုတ်ဒတ်ခ်ျလူထုအခြေပြုကျင့်ထုံးမှသိထားသည့်အတိုင်းကုမ္ပဏီအားစီမံခန့်ခွဲရန်ဘုတ်အဖွဲ့တစ်ခုတည်းသာတာ ၀ န်ရှိသည်။ ဤအပိုင်းသည်လုပ်ငန်းကုန်သည်ကြီးများအသင်းမတိုင်မီတရားစွဲဆိုမှုများစွာအပေါ် အခြေခံ၍ အရာများမည်သို့လုပ်ဆောင်သင့်သည်၊ မလုပ်သင့်သည့်ဥပမာများကိုဖော်ပြထားသည်။
SB တစ်ခုမည်သို့အလုပ်လုပ်ရမည်ကိုဥပမာအချို့ပေးရန်ကျွန်ုပ်တို့ပထမ ဦး ဆုံးလူသိများသောဥပမာအချို့ကိုဖော်ပြလိမ့်မည် OGEM အမှု။ ဤကိစ္စတွင်ဒေဝါလီခံသောစွမ်းအင်နှင့်ဆောက်လုပ်ရေးကုမ္ပဏီတစ်ခုနှင့်သက်ဆိုင်သည်။ ရှယ်ယာရှင်များကစုံစမ်းစစ်ဆေးရေးလုပ်ထုံးလုပ်နည်းတွင်ကုမ္ပဏီ၏မှန်ကန်သောစီမံခန့်ခွဲမှုအားသံသယဝင်ရန်အကြောင်းပြချက်ရှိ၊ ၎င်းကိုလုပ်ငန်းကုန်သည်ကြီးများအသင်းကအတည်ပြုသည် -
“ ဒီကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးလုပ်ငန်းကုန်သည်ကြီးများအသင်းကကြီးကြပ်ရေးဘုတ်အဖွဲ့ဆိုတာခိုင်လုံတဲ့အချက်တစ်ခုအဖြစ်ယူဆထားပါတယ်ပုံစံအမျိုးမျိုးဖြင့်ရောက်ရှိပြီးနောက်ထပ်သတင်းအချက်အလက်များကိုတောင်းခံသင့်သည့်အချက်ပြမှုများရှိသော်လည်းဤအမှုနှင့် ပတ်သက်၍ မည်သည့်ပဏာမခြေလှမ်းကိုမျှမဖော်ဆောင်ခဲ့ပါ။ ဤပျက်ကွက်မှုကြောင့် Enterprise Chamber ၏အဆိုအရဆုံးဖြတ်ချက်ချမှတ်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်သည် Ogem အတွင်းတွင်ဖြစ်ပွားခဲ့သည်၊ ၎င်းသည်နှစ်စဉ်ဆုံးရှုံးမှုများစွာဖြစ်စေခဲ့ပြီးနောက်ဆုံးတွင်အနည်းဆုံး Fl ဖြစ်သည်။ သန်း ၂၀၀ လို့ပေါ့။
ဤထင်မြင်ချက်နှင့်အတူစီးပွားရေးလုပ်ငန်းကုန်သည်ကြီးများအသင်း Ogem အတွင်းဆောက်လုပ်ရေးစီမံကိန်းများဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုနှင့်ပတ်သက်။ အချက်ကိုထုတ်ဖော်ပြောကြားခဲ့သည်မြောက်မြားစွာသောဆုံးဖြတ်ချက်များချမှတ်ခဲ့သည် အဆိုပါအရာအတွက် Ogem ၏ကြီးကြပ်ရေးအဖွဲ့သည် ၄ ​​င်း၏ကြီးကြပ်ရေးအခန်းကဏ္fulfillကိုပြည့်စုံစွာမဖြည့်ဆည်းနိုင်ခြင်းသို့မဟုတ်ထိုဆောက်လုပ်ရေးစီမံကိန်းများကြောင့်ဖြစ်ပေါ်ခဲ့သောဆုံးရှုံးမှုများကြောင့်ဆုံးဖြတ်ချက်များသည် Ogem အတွက်အလွန်အရေးကြီးသည်။။ "
အကျပ်အတည်းကာလ၌ SB မှစီမံခန့်ခွဲမှုမှားယွင်းခြင်း၏နောက်ဥပမာတစ်ခုဖြစ်သည် Laurus အမှု။ ဤကိစ္စတွင်စူပါမားကတ်ကွင်းဆက်ပြန်လည်ဖွဲ့စည်းခြင်းလုပ်ငန်းစဉ် ('စစ်ဆင်ရေးဂရင်းလန်း') တွင်ပါဝင်ခဲ့ပြီးစျေးဆိုင် ၈၀၀ ခန့်ကိုပုံသေနည်းတစ်ခုအရလည်ပတ်ရမည်ဖြစ်သည်။ ဤလုပ်ငန်းစဉ်၏ငွေကြေးထောက်ပံ့မှုသည်ပြင်ပမှအများစုဖြစ်သော်လည်းအဓိကမဟုတ်သည့်လုပ်ငန်းများရောင်းချခြင်းဖြင့်အောင်မြင်မည်ဟုမျှော်လင့်ရသည်။ သို့သော်၎င်းသည်စီစဉ်ထားသည့်အတိုင်းမသွားခဲ့ပါ၊ အဖြစ်ဆိုးတစ်ခုပြီးတစ်ခုကြောင့်ကုမ္ပဏီကို virtual ဒေဝါလီခံပြီးနောက်ရောင်းလိုက်ရသည်။ Enterprise Chamber ၏အဆိုအရ SB သည်၎င်းသည်ရည်မှန်းချက်ကြီးမားပြီးစွန့်စားသောစီမံကိန်းဖြစ်သောကြောင့်ပိုမိုတက်ကြွစွာလုပ်ဆောင်သင့်သည်။ ဥပမာအားဖြင့်သူတို့သည်အဓိကဘုတ်အဖွဲ့၏ဥက္ကchairman္ဌကိုပြင်ပတွင်ခန့်အပ်ခဲ့သည် လက်လီ လုပ်ငန်းအစီအစဉ်ကိုအကောင်အထည်ဖော်ရန်အတွက်အတွေ့အကြုံ၊ စီမံခန့်ခွဲမှုအချိန်ဇယားကိုသတ်မှတ်ထားသင့်ပြီး၎င်းသည်တည်ငြိမ်သောမူဝါဒကိုဆက်လက်လုပ်ဆောင်ခြင်းမဟုတ်သောကြောင့်ပိုမိုတင်းကျပ်သောကြီးကြပ်ကွပ်ကဲမှုကိုကျင့်သုံးသင့်သည်။
ထဲမှာ Eneco ကိစ္စတွင်အခြားတစ်ဖက်တွင်စီမံခန့်ခွဲမှုလွဲချော်မှုနောက်တစ်မျိုးရှိခဲ့သည်။ ဤတွင်အများပိုင်ရှယ်ယာရှင်များ ('ရှယ်ယာရှင်ကော်မတီ' ကိုပူးတွဲဖွဲ့စည်းခဲ့သူ) သည်ပုဂ္ဂလိကပိုင်ပြုလုပ်မှုကိုမျှော်လင့်။ သူတို့၏ရှယ်ယာများကိုရောင်းလိုကြသည်။ အစုရှယ်ယာရှင်များကော်မတီနှင့် SB တို့အကြား၊ အစုရှယ်ယာဝင်ကော်မတီနှင့်စီမံခန့်ခွဲမှုအကြားသဘောထားကွဲလွဲမှုများရှိခဲ့သည်။ SB သည်အစုရှယ်ယာရှင်များကော်မတီနှင့်စီမံခန့်ခွဲမှုဘုတ်အဖွဲ့နှင့်တိုင်ပင်ခြင်းမပြုဘဲကြားဝင်ညှိနှိုင်းရန်ဆုံးဖြတ်ခဲ့သည်။ ရလဒ်အနေဖြင့်ကုမ္ပဏီအတွင်း၌ပင်တင်းမာမှုများပိုမိုပေါ်ပေါက်လာခဲ့သည်။
ဤဖြစ်ရပ်တွင်လုပ်ငန်းကုန်သည်ကြီးများအသင်းက SB ၏လုပ်ရပ်များသည်စီမံခန့်ခွဲမှုတာ ၀ န်များနှင့်အလွန်ဝေးကွာသည်ဟုဆုံးဖြတ်ခဲ့သည်။ Eneco ၏ရှယ်ယာရှင်များပcovenantိညာဉ်တွင်အစုရှယ်ယာများရောင်းချခြင်းတွင် SB၊ အုပ်ချုပ်ရေးဘုတ်အဖွဲ့နှင့်ရှယ်ယာရှင်များအကြားပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုရှိသင့်သည်ဟုဖော်ပြထားသောကြောင့် SB သည်ဤကိစ္စနှင့် ပတ်သက်၍ လွတ်လပ်စွာဆုံးဖြတ်ခွင့်မပြုသင့်ပါ။
ထို့ကြောင့်ဤကိစ္စသည်ရောင်စဉ်၏အခြားဘက်ခြမ်းကိုပြသသည်။ ကဲ့ရဲ့ရှုတ်ချခြင်းသည် passivity နှင့် ပတ်သက်၍ သာမဟုတ်ဘဲတက်ကြွသော (စီမံခန့်ခွဲမှု) အခန်းကဏ္umကိုပါယူရန်လည်းဖြစ်နိုင်သည်။ အကျပ်အတည်း၏အခြေအနေများတွင်မည်သည့်တက်ကြွသောအခန်းကဏ္permကိုခွင့်ပြုပါသလဲ။ ဤသည်ကိုအောက်ပါကိစ္စတွင်ဆွေးနွေးထားသည်။
ဤဖြစ်ရပ်သည်သတင်း၊ အားကစားနှင့်ဖျော်ဖြေရေးကိုအာရုံစိုက်သည့်လူသိများသောမီဒီယာကုမ္ပဏီတစ်ခုဖြစ်သော Telegraaf Media Groep NV ကိုဝယ်ယူခြင်းနှင့်သက်ဆိုင်သည်။ ဝယ်ယူမှုအတွက်ကိုယ်စားလှယ်လောင်းနှစ် ဦး ရှိခဲ့သည်: Talpa နှင့် VPE နှင့်ပူးပေါင်း Mediumuis ။ သတင်းအချက်အလက်မလုံလောက်မှုကြောင့်လွှဲပြောင်းယူမှုလုပ်ငန်းမှာနှေးကွေးခဲ့သည်။ ဘုတ်အဖွဲ့သည်အဓိကအားဖြင့် Talpa ကိုအဓိကထားပြီး၊ level ကစားကွင်း။ အစုရှယ်ယာရှင်များကဤအကြောင်းနှင့်စပ်လျဉ်း။ SB သို့တိုင်ကြားခဲ့ပြီးထိုတိုင်ကြားမှုများကိုစီမံခန့်ခွဲရေးဘုတ်အဖွဲ့သို့တင်ပြခဲ့သည်။
နောက်ဆုံးတွင်ဗျူဟာမြောက်ကော်မတီကိုဘုတ်အဖွဲ့နှင့် SB ၏ဥက္ကchairman္ဌတို့ကထပ်မံညှိနှိုင်းဆွေးနွေးမှုများပြုလုပ်ရန်ဖွဲ့စည်းခဲ့သည်။ ဥက္ကchairman္ဌသည်ဆန္ဒမဲပေးပိုင်ခွင့်ရှိခဲ့ပြီး Talpa သည်အစုရှယ်ယာရှင်အများစုဖြစ်လာလိမ့်မည်မဟုတ်ချေ။ ဘုတ်အဖွဲ့သည်ပေါင်းစည်းမှုစာချုပ်ကိုလက်မှတ်ထိုးရန်ငြင်းဆန်ခဲ့ပြီး SB ကိုပယ်ချခဲ့သည်။ ဘုတ်အဖွဲ့အစား SB သည် protocol ကိုလက်မှတ်ထိုးသည်။
Talpa သည်လွှဲပြောင်းယူမှု၏ရလဒ်ကိုသဘောမတူ။ SB ၏မူဝါဒအားစုံစမ်းစစ်ဆေးရန် Enterprise Chamber သို့သွားခဲ့သည်။ OR ၏အမြင်တွင် SB ၏လုပ်ရပ်များသည်တရားမျှတခဲ့သည်။ အထူးသဖြင့်ဤလုပ်ငန်းစုသည်အစုရှယ်ယာပိုင်ရှင်အဖြစ်ဆက်လက်ရှိနေရန်နှင့်ရွေးချယ်မှုကိုနားလည်ရန်အရေးကြီးသည်။ လုပ်ငန်းရှင်များအသင်းက SB သည်စီမံခန့်ခွဲမှုအပေါ်စိတ်ရှည်မှုပျောက်ဆုံးသွားကြောင်းအသိအမှတ်ပြုသည်။ TMG အုပ်စုအတွင်းပေါ်ပေါက်လာသောတင်းမာမှုများကြောင့်ကုမ္ပဏီနှစ်ခုစလုံး၏ပေါင်းစည်းမှုစာချုပ်ကိုလက်မှတ်ရေးထိုးရန်ဘုတ်အဖွဲ့မှငြင်းဆန်ခဲ့သည်။ SB သည်စီမံခန့်ခွဲမှုနှင့်ကောင်းစွာဆက်သွယ်မှုရှိသောကြောင့်ကုမ္ပဏီ၏အကျိုးစီးပွားအတွက်သူ၏တာ ၀ န်ကိုမကျော်လွန်ခဲ့ပါ။
ဤနောက်ဆုံးအမှုကိစ္စဆွေးနွေးပြီးနောက်စီမံခန့်ခွဲမှုဘုတ်အဖွဲ့သာမက SB သည်အကျပ်အတည်းကာလများ၌အဆုံးအဖြတ်ပေးသောအခန်းကဏ္ that မှပါ ၀ င်နိုင်သည်ဟုနိဂုံးချုပ်နိုင်သည်။ COVID-19 ကူးစက်ရောဂါနှင့်ပတ်သက်ပြီးတိကျသောတရား ၀ င်ဥပဒေမရှိပါ။ သို့သော်အထက်ပါဖော်ပြချက်များအရ SB သည်ပြန်လည်သုံးသပ်ရေးအခန်းကဏ္ than ထက်ပိုမိုသောအခြေအနေများနှင့်မလုံလောက်ပါ။ ပုံမှန်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းဆောင်ရွက်မှုများ (OGEM & Laurus). SB အနေဖြင့်ကုမ္ပဏီ၏အကျိုးစီးပွားကိုစွန့်စားလျှင်ဖြစ်နိုင်သမျှစီမံခန့်ခွဲမှုဘုတ်အဖွဲ့နှင့် ပူးပေါင်း၍ ဖြစ်နိုင်သမျှအတိုင်းအတာတစ်ခုအထိပင်ဆုံးဖြတ်နိုင်သည်။ Eneco နှင့် TMG.
အကျပ်အတည်းကာလများ၌ကြီးကြပ်ရေးအဖွဲ့၏အခန်းကဏ္ about နှင့် ပတ်သက်၍ သင့်တွင်မေးခွန်းများရှိပါသလား။ ဆက်သွယ်ပါ Law & More။ ကျွန်ုပ်တို့၏ရှေ့နေများသည်ကော်ပိုရိတ်ဥပဒေနယ်ပယ်တွင်ကျွမ်းကျင်မှုရှိပြီးသင့်ကိုကူညီရန်အမြဲအဆင်သင့်ရှိသည်။
ယခင် Post မှ ကြီးကြပ်ရေးအဖွဲ့
Next Post လိုင်စင်သဘောတူညီချက်